Awe.sm Media Sosial Analytics tanteraka. Martech Zone
Awe.sm Media Sosial Analytics tanteraka
Talata, Jona 19, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha resaka marketing media sosialy, Analytics no mpanova lalao. Raha tsy misy Analytics lasa manaraka ny tsy azo atao ny mamaritra hoe inona ny fampielezan-kevitra mahomby, aiza no hitantanana ny vola miditra amin'ny doka, ary inona no mifandray amin'ny mpanjifa. Na izany aza Analytics ho an'ny Analytics tsy misy ilana azy. Ireo izay manazava ny fomba fampidiran'ny media sosialy ny lanjany na ny vokatr'izany dia misy lanjany lehibe.
Awe.sm manao marketing marketing ho an'ny haino aman-jery sosialy. Manatsara ny media sosialy izy io Analytics miaraka amin'ny "fomba fijery azo zahana", mamela ny orinasa sy ny mpivarotra hahazo valiny mazava sy voafaritra amin'ny fanontaniana toy ny hoe ny fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy dia niteraka tsindry tamin'ny tranokala, firy amin'ny tsindry toy izany no niova, ny sandan'ny fiovam-po toy izany, sy ny maro hafa.
awe.sm no sehatra mitarika ny orinasa hampiasa angon-drakitra sosialy. Mandrefy ny fomba hitarihan'ny marketing ara-tsosialy toy ny lahatsoratra Facebook sy ny fanavaozam-baovao Twitter amin'ny vokatra misy dikany izahay, toy ny fisoratana anarana, fividianana ary tanjon'ny orinasa hafa
Ity misy tafatafa iray nataon'i Scobleizer mampiseho Awe.sm ary VIPLi.st, fampiharana miasa izay mampiseho ny fahaizan'ny Awe.sm:
Awe.sm dia manolotra fitaovana famoahana boky, na azonao ampidirina ao anaty onjam-piasa efa misy izany. Izy io dia manara-maso ny lahatsoratra tsirairay avy amin'ny haino aman-jery sosialy ary manome fampahalalana amin'ny an-tsipiriany toy ny fantsona, ora antoandro, fandefasan-kafatra, atiny ary maro hafa. Izy io dia mifangaro amin'ny Google Analytics ary manome ny Return on investment amin'ny media sosialy raha ampitahaina amin'ny fantsom-barotra hafa.
Ny mari-pahaizana momba ny haavo tsirairay an'ny Awe.sm dia mamela ny fampitahana mora foana hahalala ireo fitambarana izay tsindrio. Ohatra, ny olona dia mety hisoratra anarana amin'ny hetsika navoaka. Awe.sm dia nandinika ary nahita hoe avy aiza ny bitsika na bitsika indray, na ny Facebook na ny fizarana izay niavian'ny olona nanao sonia. Ary, ny tatitra dia mihoatra ny fandraketana fotsiny ny tiana na ny fizarana, ary manome ny fepetra na ny sandany amin'ny resaka vola.
Awe.sm dia manolotra drafitra telo samihafa: drafitra manokana ho an'ny tetikasa tokana, drafitra pro izay mamela ny fitantanana tetik'asa folo samihafa miaraka ary ny drafitry ny orinasa mamela ny fitantanana tetikasa maro tsy manam-petra miaraka. Ny drafitry ny orinasa dia manolotra safidy fanaraha-maso fampisehoana haino aman-jery sosialy feno marika misy ny serivisy ampiana soatoavina toy ny URL manokana, ny tatitra natokana ho an'ny custom, ny fahaizana mampifandray ny angona awe.sm amin'ny tatitra ao an-trano sy maro hafa.
Tags: analytics apiAPIawe.smrobert scoblefanadihadiana amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialy apivipli.st
4 lakilen'ny fanentanana amin'ny finday mahomby
Desktop Mobile Overtakes ho an'ny mailaka misokatra
20 Jiona 2012 à 5:35
Ny fanadihadiana ara-barotra amin'ny media sosialy dia fomba tsara hanehoana ny anjara asan'ny fantsona sosialy amin'ny fanaraha-maso ny tranokalanao…